Bestie_Author – Page5– XB Media & News
သားဖြစ်သူ မင်းသန့်ကိုကိုတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူ ညစာ စားရင်း ပျော်ရွှင်စွရာမိသားစုအချိန်လေးကို ဖြတ်သန်း နေကြတဲ့ မင်းသူ
January 19, 2022 Bestie_Author 0
သရုပ်ဆောင် မင်းသူကတော့ အနုပညာလောကမှာ ယနေ့ထက်တိုင် နာမည်ရအောင်မြင်နေဆဲမင်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသူက တစ်ခေတ်တစ်ခါက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းခံခဲ့ရသလို မင်းသူရဲ့သားလေးကလည်း အကယ်ဒမီရွှေကြိုကနေတဆင့် လူသိများလာခဲ့ပြီး မိန်းကလေးတွေရဲ့ သည်းသည်း လှုပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသူရဲ့သား မင်းသန့်ကိုကိုက အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကို ဇောက်ချမလုပ်နိုင်တော့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားအဖတွေပီပီ ရုပ်ချင်းအရမ်းဆင်တဲ့ မင်းသူနဲ့ […]
Youtube ကပေးတဲ့ Creator Award လေး ရရှိခဲ့ ကြောင်း ကို ဝမ်းသာစွာပြောပြလာတဲ့ ယွန်းမြတ်သူ
သီချင်းတွေကို အသံလေးအေးအေးလေးနဲ့ သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်ယွန်းမြတ်သူက “အဆင်ပြေမနေပါဘူး”သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ကို စတင် မိတ် ဆက်လာပြီး နောက်ထပ်ထွက်ရှိတဲ့ ”နင်လမ်းတွေ့ခဲ့ရင်” သီချင်းဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်ရင်ထဲ ထိရောက်အောင် အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ” နင်လမ်းတွေ့ခဲ့ရင်” သီချင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက TikTok အသုံးပြုသူ လူငယ်တွေကြားမှာ […]
ပရိသတ်နဲ့ ဝေးကွာနေပြီးနောက် ခုလက်ရှိပုံလေး တစ် ပုံ ချပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း
အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ အမိုက်စား အသံပါဝါနဲ့အတူတေးသီချင်းကောင်းများစွာကို တီဆိုထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူ က ဗဟုသုတရတဲ့ စကားတွေကို မကြာခဏဆိုသလို ပြောပြလေ့ရှိပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာလဲ ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဖြူဖြူ ကတော့ တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ […]
စစ်ရှောင်စခန်းပါမချန်လုပ်ရက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ယုတ်ညံ့မှူတွေကြောင့် တမြေတည်းတရေတည်းမှာ ဒီလိုလူ တွေနဲ့အတူ လူလာဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ရင်ဖွင့်ရေးသား လာတဲ့ ချစ်သုဝေ
စစ်ရှောင်စခန်းပါမချန်လုပ်ရက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ယုတ်ညံ့မှူတွေကြောင့် တမြေတည်းတရေတည်းမှာ ဒီလိုလူတွေနဲ့အတူ လူလာဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ရင်ဖွင့်ရေးသားလာတဲ့ ချစ်သုဝေ… သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅က၊ဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကစကစရဲ့ယုတ်မာမှုတွေကိုအခုလိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ချစ် သုဝေက နေအိမ်ပျောက်၊အနာဂတ်ဝေဝါး၊ခဏတာခိုရတဲ့စစ်ရှောင် စခန်းပါမချန်လုပ်ရက်တဲ့လူမဆန်တဲ့ယုတ်ညံ့မှူကမနည်းမနောပဲပါလားကွယ်ရို့၊အဲ့ဒါကျရောဘယ်ခေါင်စဉ်အောက်ထည့်ပြီးcoverလုပ်ကြမလဲဟေ၊ပြည်သူတွေဟ၊အရွယ်စုံလို့ရင်ခွင်ပိုက်ရော၊သက်ကြီးဖိုးဖွားရော၊ တမြေတည်းလူလာဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေများကွာဆိုပြီးသူမရဲ့InstagramStoryမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး များအ တွက်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ [zawgyi] စစ္ေရွာင္စခန္းပါမခ်န္လုပ္ရက္တဲ့လူမဆန္တဲ့ယုတ္ညံ့မႉေတြေၾကာင့္ တေျမတည္းတေရတည္းမွာ ဒီလိုလူေတြနဲ႔အတူ လူလာျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡကို ရင္ဖြင့္ေရးသားလာတဲ့ ခ်စ္သုေဝ… သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်စ္သုေဝကေတာ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာျပည္သူေတြနဲ႔အတူပါဝင္ၿပီးလမ္းထြက္ကာလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာအားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅က၊ျဖင့္မတရားအမႈဖြင့္ထားျခင္းခံရၿပီးေဘးကင္းရာကိုေရွာင္တိမ္းေနရပါတယ္ေနာ္။ အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်စ္သုေဝကစကစရဲ႕ယုတ္မာမႈေတြကိုအခုလိုရင္ဖြင့္ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်စ္ […]
MRTV-4 နဲ့ စာချုပ် ဆက်မချုပ်ဖြစ်တော့တဲ့ နောက် ကွယ်က အကြောင်းအရင်းအမှန်ကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ခေးဆက်သွင်
သရုပ်ဆောင် ခေးဆက်သွင်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အံဝင်ခွင်ကျသရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ပါပဲ။ MRTV-4 သရုပ်ဆောင်အဖြစ် လူသိများခဲ့တဲ့ ခေးဆက်သွင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာတော့MRTV-4 နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပြီး သူမတစ်ယောက်တည်း သီးသန့် အနုပညာ အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေက ခေးဆက်သွင်ကို MRTV-4 နဲ့ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလို့ […]
မကြာသေးခင်က စမိုင်းလ်ခင်ပွန်းရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်တွင် ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ အမေရိကား မှာရှိတဲ့ သူမတို ့ပိုင်ဆိုင်သော အမိုက်စား အိမ်ကြီးကို ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီး ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့ အိမ်ရှေ့တွင်လည်း အမိုက် စား ကားကြီးနှစ်စီးကိုလည်း ရပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် […]
January 18, 2022 Bestie_Author 0
မော်ဒန် အောန်ဆိုင်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်း တလေးတစားဆက်ဆံတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထောင် ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိသားစုနဲ့အတူ ပြည်ပနိုင်ငံမှာ နေထိုင်လျက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောန်ဆိုင်းကတော့ သူမရဲ့ တစ်နေ့တာကို သားလေး ဧဝရတ်မိုးမြင့်အား အချိန်ပေးရင်းဖြင့်သာ ကုန်ဆုံးလျက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
သူမ ငယ်စဉ်က ပညာမဆုံလင်ခဲ့တာကြောင့် စာနာစိတ်နဲ့ နောက်မျိူးဆက်တွေ အဆင်ပြေစွာ စာသင်ကြားနိုင်ရန် ကျောင်းဆောင်လေး လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
အကယ်ဒမီမင်းသမီးထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တစ်ခေတ်မှာ ထက်ထက်မိုးဦးခေတ်ရယ်လို့ နာမည်တွင်ခဲ့ပြီး ကြော်ငြာဘုရင်မလို့လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခိုင်အမာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထူးချွန်တဲ့ သူမကတော့ အကယ်ဒမီဆုတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Live Sale တွေမှာလည်း အမြဲလိုလိုတွေ့မြင်နေရတဲ့ မထက်ကတော့ […]
(၁၅) ရက်အတွင်း (၁၀)ကီလိုဂရမ် လျော့ချနိုင်မည့် ဖျော်ရည်တစ်ခွက်
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ မလိုဘဲ အလွယ် ဝိတ်ချ နိုင်မည့် နည်းလမ်းေ ကာင်းလေး တစ်ခုကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ…. လတ်ဆတ် တဲ့ပင်စိမ်း (၅)ရွက် လတ်ဆတ်တဲ့ ပူစီ နံရွက် (၅)ရွက် ဂျင်း(1/4)ကိုသေး ငယ်သော အတုံးလေး များဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အိုးထဲထည့်ပါမယ်။ […]
ဒီpost မနက်တခါ ညနေတခါ အကြိမ်အကြိမ်ဖတ်မိနိုင်အောင်saveထားဖို့လိုအပ်တယ် ဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရားကို ထင်မြင်သာနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေ ထောက်ပြထားတယ်။ #Finance အကြောင်း ဘာမှမရေးဖြစ်တာကြာပြီရယ်၊ ခုလည်း ခေါင်းထဲပေါ်လာတာလေး နှစ်ခု လိုရင်းတိုရှင်း ချရေးလိုက်တာ … ။ အဲဒီအမှားနှစ်ခု တောက်လျှောက် မြင်နေရလို့။ Buy Low ! Sell High […]